Ongakubona - Izindaba Zokuvakasha | Izindaba Zokuvakasha (Ikhasi 3)
Izinto ezi-5 okufanele zenziwe eRio de Janeiro
I-Rio iyinhloko-dolobha yezokuvakasha eningizimu ngakho-ke uma uhlela ukuhamba ungaphuthelwa yilezi zinto ezi-5: amagquma, amabhishi, ama-favelas, ibhola kanye nempela, uKristu.
Okufanele ukwenze izinsuku ezintathu eShanghai
IShanghai yidolobha elinabantu abaningi kodwa ungethuki, kufanele u-ode uhambo. Ngakho-ke, bhala phansi ukuthi yini okufanele uyenze izinsuku ezintathu eShanghai ukuze ungaphuthelwa okuhamba phambili.
5 uhlela ukujabulela ihlobo eMadrid
U-Agasti ufika futhi abantu baseMadrid banyathela i-accelerator ukushiya idolobha elikhulu ngemuva. Alukho ibhishi futhi kudala ...
Ama-escalator aseHong Kong, uhambo olujabulisa kakhulu
Ngabe uya eHong Kong? Kuhle! Ungaphuthelwa yizi-escalator zayo, ezinde kunazo zonke emhlabeni: ziya ehla zenyuka futhi zidlula ezitolo, ezindaweni zokuphuzela nezindawo zokudlela.
Izindawo ongavakashela kuzo lokhu kuwa
Thola imibono embalwa yokukhetha izindawo zokuvakasha lokhu kuwa, kusuka emapaki emvelo, emabhishi noma emadolobheni aseYurophu.
Uhambo oluvela eBucharest
Uma uya eRomania ungahlali eBucharest, hamba uhambo! Kunezindawo ezinhle kakhulu eziseduze kakhulu phakathi kwenqaba kaDracula, izigodlo, amahlathi namadolobha.
Izizathu zokukhetha indawo yasemakhaya eholidini lakho
Thola ezinye zezizathu ezinhle zokukhetha indawo yasemakhaya eholidini lakho elilandelayo, indawo ethulile emvelweni.
ITowers of Florence, izimpawu nezindawo zokubuka
Uma uvakashela iFlorence, ungakhohlwa ukukhuphuka imibhoshongo yayo yangenkathi ephakathi: zingumbono omuhle we-panoramic! Bhala phansi lawa magama bese uwajabulela.
Amadolobha ama-9 amahle wokubalekela
Thola lawa madolobha amahle angama-9 atholakala e-geography yaseSpain, amakhona amancane lapho kuningi ongakubona lapho ubaleka.
20 amadolobha amahle eGalicia II
Thola amanye amadolobha ayishumi amahle eGalicia kulokhu kukhethwa kwezindawo ezincane ongazivakashela kuleli zwe elihle.
20 amadolobha amahle eGalicia I
Thola amadolobha ayishumi aphezulu kwamashumi amabili amahle eGalicia. Izindawo ezinokunikeza okuningi emakhoneni amancane.
I-Aberdeen, iparele eScotland
I-Aberdeen iyindawo enhle eScotland: amasonto, amabhishi, izinqaba, ama-whisky distilleries, uWilliam Wallace. Yini enye oyifunayo?!
Izinto ezibalulekile eziyi-11 zokujabulela iGranada
Thola izinto eziyi-11 ezibalulekile ukuze ujabulele iGranada, imibono yazo zonke izinto ozithandayo edolobheni laseGranada namaphethelo.
Izindawo ezi-5 zokuvakashela eLima
ILima ingelinye lamadolobha amahle futhi aphelele ukuvakashelwa: umlando wamakholoni, ubuciko nomlando wangaphambi kweColombia, amapaki, izigodlo nokunye okuningi.
I-WorldPride Madrid 2017, umhlahlandlela ocacile wamaqembu wokuziqhenya
Kusukela ngoJulayi 23 kuya ku-2, iMadrid inokuningi okufanele ikugubhe. Ngaphansi kwesiqubulo esithi "Thanda umuntu omthandayo, iMadrid izo ...
Izinsuku zasehlobo eBratislava
Ngabe unentshisekelo kuBratislava? Ingabe kuzwakala kuyimfihlakalo kanye neNkathi Ephakathi? Ngakho-ke, livakashele ngoba ngeke udumazeke: izinqaba, amasonto, amachibi nemikhosi yangenkathi ephakathi.
USigüenza uwina isihloko esithi Capital of Rural Tourism ngo-2017
USigüenza usanda kuwina isihloko esingokomfanekiso seCapital of Rural Tourism e2017 esinikezwe yingosi ...
ICathedral-Mosque yaseCórdoba isiza esihle kunazo zonke sezivakashi eYurophu 2017
ISpain ingelinye lamazwe aheha izivakashi eziningi minyaka yonke ngenxa yenhlanganisela yalo enhle kakhulu ye-gastronomy, isiko, ...
5 iminyuziyamu emnandi yokuvakashela nezingane namathiphu okukwenza
NgoMeyi 18, kwakukhunjulwa uSuku Lomhlaba Lomnyuziyamu, usuku olufanele lokukhumbula ukuthi ...
5 izindawo eziyimfihlakalo eParis
IParis yidolobha lasendulo futhi linamakhona amaningi angaqondakali. Ezinye ziyaziwa kanti ezinye azaziwa kangako. UMnyuziyamu weVampirism, igceke lamatshe amathuna?
Izinto ozozibona eFuerteventura
Thola izinto eziningi ongazibona futhi uzenze esiqhingini saseFuerteventura, kusuka emabhishi kuya ezindaweni zemvelo nasemadolobheni athokomele.
4 amasonto amahle namancane awaziwayo eParis
Ingabe uvakashela eParis futhi uyawathanda amasonto? Ngemuva kwalokho qiniseka ukuthi uvakashela la mabandla amane namasonto: awaziwa kancane kepha ayathandeka.
Izindawo ezi-7 ezahlukahlukene zeMay Bridge
Ngemuva kwePhasika, kufika ibhuloho langoMeyi, kwabaningi okuyisandulela samaholidi asehlobo abekade elindelwe. Labo…
Ukuhambela e-Ibiza usuka eMadrid ngama-euro angaphezu kwama-4
Sithole lokhu okukhulu: Ukuhambela e-Ibiza kusuka eMadrid ngama-euro angaphezu kwama-4 e-eDreams. Sebenzisa leli thuba!
Mojácar, indawo ebukekayo e-Almería
Ingabe usuvele uhlela ihlobo 2017? Landela ilanga ulibangise e-Almería: idolobhana elihle laseMojácar namabhishi alo amangalisayo akulindele lapho.
I-Basilica yase-Atocha kanye nePantheon of Illustrious Men of Madrid
Eduze nePlaza de Carlos V eMadrid, edume kakhulu nge-Atocha, kuneBasilica of Our Lady ...
Ukuya eJapan ukuya emihlanganweni yasentwasahlobo i-hanami
Ngesikhathi sentwasahlobo izinsuku zinde, amazinga okushisa aba mnandi futhi singajabulela imvelo kukho konke ...
Ukuvakasha Ugwadule lwaseTabernas noma iSpanish Far West
Ugwadule lwaseTabernas e-Almería lungezinye zezinto eziyimvelo eziyimangalisa emangalisa umhambi ovakashelayo ...
Izindawo eziyinhloko nokuvakashelwa eVictoria, Australia
Yazi izindawo eziyinhloko nokuvakashelwa esifundeni saseVictoria eningizimu-mpumalanga ye-Australia, isifunda esigcwele amabhishi nezivini.
Izindawo ezi-5 ezikhetheke kakhulu ongaya kuzo ngo-2017
Kuncane kakhulu okusele ngamaholidi ephasika nangehlobo elizayo ngakho-ke sekuyisikhathi sokuthi ...
Izindawo ezi-5 ezinhle kakhulu zokubona iNew York ngenhla
Indlela enhle yokwazisa ngobuhle beNew York ivela phezulu, ngakho-ke lungiselela lawa ma-vantage amaphuzu amahlanu ukuthatha izithombe ezinhle kakhulu.
Kawagoe, eLittle Edo ngaseTokyo
Uma useTokyo futhi uyithola yesimanjemanje futhi inabantu abaningi, hamba uye eKawagoe, eLittle Edo, eduze kakhulu, bese uthola iJapan yangenkathi ephakathi.
Uhambo oluya eNtabeni iTakao, indawo ye-panoramic eTokyo
Ngabe useTokyo futhi ufuna ukubona imvelo? Qonda ngaseNtabeni iTakao, kude nehora elilodwa: ikhebula, isihlalo, amahlathi, izihlahla ze-cherry, izinkawu nokubukwa okuhle kakhulu.
Ukuvakashela imigede emnandi emhlabeni jikelele
I-athikili yanamuhla imayelana nemigede emnandi esingayithola emhlabeni. Sikhethe ezi-6 kuphela, ingabe ufuna ukubona okuningi?
Ukuhambahamba uzungeze iMalasaña, indawo yase-hipster yaseMadrid
Inguquko kwezamasiko nakwezenhlalo iMadrid yabhekana nayo phakathi kweminyaka yama-70s nama-80s yekhulu lama-XNUMX ...
INyakatho Alaska, umkhawulo womhlaba
Uma uthanda uMvelo ngosonhlamvukazi awukwazi ukuphuthelwa i-Alaska. Inyakatho yingxenye yombuso ekude kakhulu futhi emangele kakhulu futhi yinhle.
Izindawo eziyinhloko zezivakashi eMongolia
Uma uthanda imvelo futhi ulahleka ezindaweni ezikude nezingajwayelekile, sekuyisikhathi sokuthi uthole ubuhle bemvelo namasiko eMongolia.
IMongolia, ukuvakasha okungajwayelekile
IMongolia iyindawo exotic futhi enhle yezivakashi ngasikhathi sinye. Uma ufuna ukuhlala i-adventure, la mazwe ogwadule, izintaba namathafa akulindile.
Inqaba ngesifundazwe sase-Andalusia (II)
I-athikili yanamuhla ingukuqhubeka kwangaphambilini ezinqabeni zesifundazwe sase-Andalusian. Kulokhu sikulethela ezinye ezine.
Inqaba ngesifundazwe sase-Andalusi (I)
I-athikili yanamuhla ilungele labo abathanda umlando nezwe lezinqaba: i-Andalusia nezinqaba zayo, esisodwa esifundazweni ngasinye.
Vakashela iBelfast neDublin
Ingabe useBelfast? Ungenza uhambo oluya eDublin, liseduze futhi kunokuningi ongakubona. Bhala phansi ukuthi ungawahlanganisa kanjani womabili amadolobha nokuthi yini ozoyibona kulelo nalelo dolobha.
Vakashela eLondon nase-Edinburgh
Kuthiwani ngokuvakashela eLondon bese uhambela e-Edinburgh? Lapha unemininingwane yokuthi ungakwenza kanjani nokuthi uvakashele ini kuwo womabili amadolobha.
Izindawo zokugubha iminyaka engu-5 zokuvakashela eSpain kulo nyaka we-2017
Isanda kukhishwa le 2017, sekuyisikhathi sokuqala ukucabanga ngokuthi yini ezoba ngcono esizoyenza kulo nyaka. Kushiye ishumi nanye ...
Yini ongayibona eHanoi, inhlokodolobha yaseVietnam
IHanoi iyisango eliya eVietnam ngakho-ke chitha izinsuku ezimbalwa ukwazi ukuthi yini ekuhlinzekayo: idolobha elidala, izimakethe, amathempeli nama-pagodas.
Izinhlelo ezi-7 zokugubha uNyaka Omusha waseChina eMadrid
Kusukela ngoJanuwari 13 kuya kuFebhuwari 17, unyaka omusha waseChina uzogujwa eMadrid, ngakho-ke cha ...
Yusupov Palace, lapho wabulawa Rasputin
ISt. Petersburg idume ngezigodlo zayo kodwa kwesinye kuphela kwabulawa uRasputin. Yingakho ungeke uphuthelwe yusupov esigodlweni.
5 ezikhangayo ezingaziwa kangako kodwa ezingasoze zalibaleka eRoma
Ngabe uya eRoma? Ungahlali ezikhangayo ezivame kakhulu futhi wazi izindawo ezinhle futhi ezingavakashelwe kangako. Hlangana neRoma engaziwa!
5 uhlela ukukwenza ngoKhisimusi izingane zakho ezizokubuza zona
Umculi odumile u-Andy Williams wayevame ukusho kwenye yezingoma zakhe ezithandwayo ukuthi uKhisimusi uyona ...
5 Izindawo zikaKhisimusi ohlukile
Kulesi sihloko sithola izindawo ezi-5 zokuchitha uKhisimusi ohlukile. Uma ungayithandi imikhosi kaKhisimusi kakhulu, uzozithanda lezi zindawo.
IBaños, iparele elifihliwe e-Ecuador
Uma uthatha isinqumo sokuvakashela i-Ecuador, ungaphuthelwa idolobha elisentabeni laseBaños. Kuyipharadesi langempela labathandi bemisebenzi yangaphandle.
Yini ongayibona eShiraz, e-Iran
Thola izimangaliso zaseShiraz, elinye lamadolobha amadala kakhulu e-Iran. Izingadi, ama-mausoleum, ama-mosque, ama-bazaars, izindawo zokuhamba.
Ukubona okuningi e-Iran
I-Iran iyaqhubeka nokusimangaza ngezimangaliso zayo. I-Isfahan yidolobha elikhulu, elinamasiko nelamagugu omhlaba. Ungacabangi ngokungayivakasheli!
Uhambo oluya e-Iran, izindawo zalo eziheha izivakashi
Thola izimangaliso zabavakashi zase-Iran, uqale ngePersepolis yasendulo nezigodlo neminyuziyamu yaseTehran, inhloko-dolobha yayo.
Vakashela iminyuziyamu ye-Archaeological yase-Istanbul
I-Istanbul yidolobha elinomlando omningi, ubuciko namasiko futhi indawo engcono kakhulu yokwazi konke lokhu yi-Archaeological Museum yayo, ikhaya lamafa ayo amakhulu.
Ngabe uya eWashington? Ngemuva kwalokho ungaphuthelwa ukuvakashela izingosi ezimbili ezihehayo e-United States: iCasa Balnca nePentagon. Kukhona izinkambo zamahhala.
Okufanele ukwenze eLima, inhlokodolobha yasePeru
Ngabe uzomazi uMachu Pichu? Ngakho-ke sebenzisa ngokunenzuzo futhi uchithe izinsuku ezimbalwa eLima, inhloko-dolobha yasePeru. Kungumuzi omkhulu! Ama-Inca, amakoloni, ukudla, ubuciko, isiko.
IMadagascar, ipharadesi elinephunga elimnandi le-vanilla
Uma uthanda ukuhlola, ukuthola nokuthanda, ungayeki ukuhamba, ukuvakasha nokujabulela iMadagascar, ipharadesi lokugcina eMhlabeni.
Izindawo eziseduze zokubaleka ngoNovemba
Ngemuva kwebhuloho laseTodos los Santos, nezingubo ze-Halloween ezigcinwe ekhabetheni, nohhafu ...
Iminyuziyamu emine eBuenos Aires
Ingabe uvakashela iBuenos Aires? Qiniseka ukuthi uvakashela lezi zindawo ezine ezikhethekile: iColón Theatre, i-Evita Museum, i-Immigration Museum neBarolo Palace.
Hamba esifundeni seCaribbean seCosta Rica bese uthola amabhishi, amahlathi, izimpophoma, izintaba, amadolobhana nezinye izimangaliso ezingapheli.
5 amabhuloho ayingqayizivele lapho uzofuna ukuthatha i-selfie
Amabhuloho asebenzelana nalokhu okuthunyelwe angaphezulu nje kwesixhumanisi sokuxhuma phakathi kwamabhishi amabili. Ngiyazi…
Izintshisekelo zaseParis ezizokushiya ungawuvali umlomo
Sikukhombisa izifiso eziyishumi zaseParis ongazi neze, futhi lokho kuzokwenza ubone idolobha ngamehlo amasha ngokuphelele.
Amaholide eCape Verde
Ngabe unesibindi sokuya eCape Verde? Landela lo mhlahlandlela futhi uzoba nesikhathi esimnandi!
Ngabe uya eJamaica? Kuhle! Bhala phansi konke ongakwenza futhi okufanele ukwenze kuleli pharadesi laseCaribbean.
I-China, izwe lamabhuloho okuqopha umlando
Ukunambitheka kokwakhiwa kwemega eChina kuyaziwa, ikakhulukazi isikhashana manje. Inhloso…
Ukuya ehlane laseTabernas e-Almería noma e-Far West yaseSpain
Enye yezinto ezitholakala ngokungenzeki kakhulu eNhlonhlweni Yase-Iberia yiThabernas Desert, okuwukuphela kogwadule eYurophu. Itholakala ...
Izizathu ezi-5 zokuya e-Indonesia futhi uzijabulele
Kubahambi abaningi, i-Indonesia ingasho izinto eziningi, kepha ngaphezu kwakho konke ukuzijabulisa. Ukwehluka kwemvelo kwezwe kuyamangaza: kusuka kokuminyene ...
Eminye imifanekiso ozoyithanda ukuvakashela uma uhambela umhlaba
Esihlokweni esandulele, sikwethulele ezithombeni ezithile ezidumile esingazithola "zivikelekile" uma sihambela izindawo ezithile emhlabeni….
Uhambo oluya ezithombeni ezidume kakhulu futhi ezihlaba umxhwele emhlabeni
Uma ungomunye wabahambi abathanda ukuhambela iqiniso elilula lokuphumula, ulele elangeni epharadesi ...
I-National Maritime-Terrestrial Park yeziQhingi ze-Atlantic eGalicia
I-National Maritime-Terrestrial Park yeziQhingi ze-Atlantic eGalicia ineziqhingi ezithile okufanele zivakashelwe, kusuka eCíes kuya eSálvora.
Amakhona ayisithupha omlingo eGalicia
Thola amakhona ambalwa omlingo eGalicia, indawo eqhubeka nokukhula kwezokuvakasha ngenxa yakho konke ekuhlinzekayo.
Bologna, ukuhamba edolobheni lolwazi
Thola izimangaliso zeBologna, idolobha elineminyuziyamu, imipheme, eyunivesithi kanye nokudla okuhle e-Italy!
Ukwazi amakhona weDubrovnik, iparele le-Adriatic
IDubrovnik ingelinye lamadolobha asemfashinini eYurophu. Ubuhle baleli dolobha elisogwini lweDalmatia…
Izingwadule ezi-6 ezinhle kakhulu emhlabeni
Thola izingwadule eziyisithupha ezinhle kakhulu emhlabeni, lapho ungajabulela khona izingqimba zemvelo ezingakholeki nezikhala ezinkulu.
Shibam, idolobha lasendulo elinezakhiwo
Ubuwazi ukuthi eYemen kukhona idolobha lasendulo elibukeka lisesimanjemanje ngoba liyisakhiwo esimsulwa?
Izinto ozozibona nokuzenza eJordani
Thola ukuthi zingaki izinto okufanele uzibone futhi uzenze eJordani ezibalulekile, ngaphandle kokubona idolobha lasePetra.
Izindawo ezi-7 zabathandi bomlando
Uhambo lwama-buffs omlando lunezindawo ezifana nalezi esikukhombisa zona, kusukela emibhoshongweni waseGibhithe kuya eStonehenge.
Uhambo olunhlanu oluvela eDublin ukuyojabulela ihlobo
Ngenkathi useDublin ungahamba kakhulu, ngokwesibonelo, yazi amadolobhana asogwini eDublin Bay. Bahle!
Izindawo ezinhlanu eziphezulu ehlobo lika-2016
Abekho abahambi abambalwa abalinda umzuzu wokugcina ukulungiselela amaholide abo ehlobo noma benze izindlela zokuphumula ezincane, ...
Iziqhingi ezine ezingakholeki zezimo ezihlukile emhlabeni
Umhlaba uyikhaya lomcebo omangalisayo, okunye obekungahlala kufihliwe ukube intuthuko yesimanjemanje ibingenawo ...
Uhambo oluya eParis, ongakubona edolobheni
Idolobha laseParis luhambo okumele wonke umuntu akwenze, futhi ngalokhu kukhona uhlu lwezinto ezibalulekile ongabona ukuthi akufanele uziphuthe.
Yini ongayibona e-Amman, inhlokodolobha yaseJordani
I-Amman ingelinye lamadolobha asentshonalanga kakhulu eMiddle East, ngakho-ke unganqikazi ukuyivakashela uthole amagugu ayo.
ICairo, ongakubona edolobheni laphakade
Ngabe uzizwa uthanda ukuya eCairo? Unganqikazi, bhala phansi lawa macebiso, upake ipotimende lakho nohambo, ngeke uzisole!
Yini ongayivakashela eFlorence
Uma uya eFlorence, ungaphuthelwa iminyuziyamu yayo, izigodlo zayo kanye nezikwele zayo. Uzoyithanda!
Imizi emithathu ozoyivakashela usuka ePrague
Uma uya ePrague kuleli hlobo, ungaphuthelwa uPilsen, uCeské Budejovice noFrantiskovy Lázne. Lezi yizindlela ezintathu ongasoze wazilibala ezivela enhlokodolobha yaseCzech!
Yimiphi iminyuziyamu engama-20 evakashelwa kakhulu emhlabeni?
Ngokombiko waminyaka yonke i-TEA / AECOM Theme Index neMuseum Museum, unyaka nonyaka ehlaziya idatha evela eminyuziyamu kanye ...
Izindawo eziyisikhombisa ezibalulekile eSan Isidro
Njalo ngoMeyi 15, iMadrid igubha imikhosi yaseSan Isidro. Yini eyaqala njengohambo lokuya e ...
Izinto eziyi-7 okufanele zenziwe eMallorca
Thola izinto eziyisikhombisa ezibalulekile ongazenza eMallorca, isiqhingi esinamabhishi amaningi nama-koves anamanzi acwebile e-crystal.
Izinkantini ezintathu zaseLondon eziyinqaba nezomlando kakhulu
Uma uvakashela eLondon futhi uthanda imigoqo, qiniseka ukuthi uvakashela lezi zinkantini ezintathu zesiNgisi eziphakathi kwezingandile futhi zinomlando kakhulu edolobheni.
ICoachella, umkhosi womculo wonke umuntu akhuluma ngawo
ICoachella ngumkhosi womculo wonke umuntu akhuluma ngawo futhi wonke umuntu ufuna ukuya kuwo. Kugujwa…
Yini ongayibona esiqhingini esikhulu, isiqhingi esikhulu futhi esihluke kakhulu eHawaii
Uma ufuna ukucwilisa izinyawo zakho esihlabathini esimnyama, ukuhamba ngezinyawo eduze nezintaba-mlilo, ukuqwala emahlathini emvula, nokugeza ezimpophomeni, awukwazi ukuphuthelwa iHawaii!
Amachibi ayisikhombisa anemibala abonakala evela kwenye iplanethi
IBaikal, iVictoria, iTiticaca, iMichigan noma iTanganyika ngamachibi okungenzeka adume kakhulu e ...
Okuhlangenwe nakho okuthathu ongakuphuthelwa eSydney
Ngabe uya eSidney? Ungabuyi ungakaze uphile okunye kwalokhu kokuhlangenwe nakho okuthathu okuthokozisayo ebhulohweni lazo eliyisithonjana: ukukhuphuka ibhuloho, ukuhamba kulo noma ukundiza endizeni enophephela emhlane, yikuphi okuthanda kakhulu?
Izizathu ezinhlanu ezinamandla zokwazi iTeruel
Ezifundazweni ezintathu ezakha umphakathi wase-Aragon, iTeruel mhlawumbe iyindawo enkulu engaziwa. Kodwa-ke, ...
Amawa amathathu amahle kakhulu emhlabeni
Kukhona izindawo ezinhle kakhulu emhlabeni wonke kodwa ngicabanga ukuthi amawa angenye yezinto ezinhle kakhulu futhi eziqine kakhulu….
Izindawo eziyisithupha ezishibhile ongazivakashela ngo-2016
Ukuhamba uzungeze iplanethi, ukwazi amasiko athile, ukuthola izindawo ezinhle kakhulu nokunambitha izindawo zokudlela eziyinqaba kakhulu emhlabeni…
Okuhamba phambili kwe-Ecuador: Pailón del Diablo
IPailón del Diablo iyimpophoma eMfuleni iPastaza etholakala e-Ecuadorian Andes eduze nedolobha laseBaños de Agua Santa
Iminyuziyamu emine yamahhala eLondon
Uma ungenayo imali ongayonga, vakashela iminyuziyamu yamahhala eLondon
Thola amaNevados del Peru ayisihlanu amahle kakhulu futhi ujabulele indawo emhlophe enikezwa yilezi zintaba ezinkulu zasePeru.
IPalmyra yamenyezelwa njengeGugu Lomhlaba ngo-1980. Itholakala maphakathi nehlane futhi eduze ne-oasis, ingesinye sezinsalela ezibaluleke kakhulu zemivubukulo ezisalondoloziwe.
Izindawo ezihamba phambili zezivakashi eBenidorm
Leli yidolobha elikhetheke kakhulu lapho uzokwazi khona ukuba neholide ongilibalekayo. Thola ukuthi yiziphi izindawo zokuvakasha ezihamba phambili eBenidorm.
Izindawo ezihamba phambili zokuvakasha eBuenos Aires
Uhlu lwezindawo ezinhle kakhulu zokuvakasha eBuenos Aires enhle
Izingwadule ezinkulu zase-Asia
Ingabe uya e-Asia? Sithola izingwadule eziyisithupha ezinkulu ezwenikazi ukuze uthokozele ubuhle bazo nezigcawu ezingalindelekile. Ngabe uzoyikhumbula?
ILondon nayo inezakhiwo zesimanje
Uyayithanda imidwebo yesimanje? Sikukhombisa izingcezu zamanje zokwakha eLondon ongeke uziphuthe uma uzohamba lapho.
IQuilotoa, iparele lama-Andes ase-Ecuador
IQuilotoa yintabamlilo yase-Ecuadorian umgodi wayo uqongelele lokho okubizwa ngokuthi ichibi lomgodi. Elinye lamachibi entaba-mlilo amangalisa kakhulu emhlabeni.
IChernobyl, usuku esikhungweni samandla enuzi (ingxenye II) - Uhambo
Ngolunye usuku eChernobyl nasePrypiat izikhungo zamandla enuzi, ezisendaweni engamahora amabili kuphela ngemoto zisuka eKiev, inhloko-dolobha yase-Ukraine. Ukuvakasha kwenuzi nomlando.